ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ အခြေခံကျကျ သိရှိစေရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ လေ့လာမိသလောက် တင်ပြခြင်းဖြစ်၍ လိုအပ်ချက်များ ရှိဆဲပါ ....။
Posted by ကိုရုပ်ဆိုး at 4:49 PM
Posted by ကိုရုပ်ဆိုး at 2:25 PM
ပြော ပြု တွေးလျှင် သတိယှဉ်
Posted by ကိုရုပ်ဆိုး at 2:23 PM
Labels: သံဝေဂ လင်္ကာ
တို့လျှင် ဧည့်သည် ပါတကား။
Posted by ကိုရုပ်ဆိုး at 2:22 PM
Header တွင်ဖော်ပြထားသော ဘုရားပုံမှာ အောက်ပါ website မှ ကူးယူထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
အညွှန်းများ (Click Me!)
ခဲဖွယ်နှင့် ဘောဇဉ် (1)
ဆီမီး ကပ်လှူခြင်း (1)
တရားဂုဏ်တော် ခြောက်ပါး (1)
ဗုဒ္ဓ၀င် အကျဉ်းချုပ်ဆောင်ပုဒ် (1)
မဟာပဋ္ဌာန်း ပစ္စယနိဒ္ဒေသ (1)
သံဃာ့ဂုဏ်တော် ကိုးပါး (1)
သံဝေဂ လင်္ကာ (4)
အနန္တငါးပါး ဘုရားရှိခိုး (1)
အလှူ အကျိုးတရား (5)
တင်ထားသမျှ (Click Me!)
အနိစ္စ, ဒုက္ခ, အနတ္တ
သံဃာ့ဂုဏ်တော် ကိုးပါးပါဠိ, အနက်, သရုပ်, အကျိုးကျေး...
တရားဂုဏ်တော် ခြောက်ပါးပါဠိ, အနက်, သရုပ်, အကျိုးကျေ...
ဘုရားဂုဏ်တော် ကိုးပါးပါဠိ, အနက်, သရုပ်, အကျိုးကျေး...
ခဲဖွယ်နှင့် ဘောဇဉ် အနက်
ဆွမ်း, ရေချမ်း, ပန်း, ဆီမီး ကပ်လှူခြင်း
ရေးခဲ့ပါဗျာ (Click Me!)